Guddoomiye Sheekh Xuseen “Waxaan qorsheyneynaa inaan dib u dayactir ku sameyno waddada isku xirta Beledweyne iyo Buulo-burte” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bulshada ee Gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa sheegay in uu jiro horumar dhinacyo badan oo la taaban karo, isla markaana iminka qorsheynayaan sidii loo xoojin lahaa adeegyada aas aasiga u ah bulshada.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bulshada ee Gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo la hadlayay Radio Muqdisho ayaa sheegay in xaaladda amniga ee gobolka uu yahay mid soo hagaagaysa, isla markaana ay ciidamada amniga xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, taasi oo uu ku sheegay inay qeyb ka qaadatay xoojinta nabadgelyada gobolka.
Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa tilmaamay inay jiraan kulamo looga hadlayo aayaha bulshada oo ay wadaan odoyaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ay soo dhaweynayaan ka maamul ahaan, maadama kulamadaasi ay yihiin kuwa aayaha gobolka ku saabsan, isla markaana aan cid gaar ah loogu daneynin.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bulshada ee Gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa hoosta ka xariiqay in waddo dher oo xiriirisa buulo-burte iyo beledweyne ay qorsheynayaan inay dib u dayactir ku sameeyaan, isagoo shacabka ka codsaday inay ka qeyb qaataan mashaariicda lagu horumarinayo gobolka.
← Ciidamada xoogga dalka oo la wareegay gacan ku heynta deegaanka Buur-weyn → More War than Peace